I-reflux ye-gastroesophageal, yikuphi ukudla okufanele ukugweme | Bezzia
UToñy Torres | 09/05/2022 16:00 | Izifo
I-Gastroesophageal Reflux yisifo esithinta uhlelo lokugaya ukudla. Lokhu kuthinta indlela yokuhlanganisa ukudla ngesikhathi sokugaya, njengoba ukudla kungafinyeleli esiswini ngendlela efanele ngokusebenzisa umminzo. Lokhu kwenzeka ngenxa yokuguqulwa kwe-valve elawula ukudlula kwalokho okuqukethe umphimbo ukuya esiswini.
Uma le valve ingalungisi kahle noma ixegisa ngendlela engafanele, kwenzeka lokho okwaziwa ngokuthi i-reflux. Okusho ukuthi, ingxenye ethile yokudla okudliwayo ayifiki esiswini futhi ibuya emgomeni iye emlonyeni. Ini kungabangela umonakalo omkhulu ezingeni lokugaya ukudla, njengoba ulwelwesi lwamafinyila lucasukile futhi ezinye izinhlobo zezimpawu ezitholakalayo zingase zenzeke njengomphumela.
1 Ukudla okufanele ukugweme uma une-reflux ye-gastroesophageal
1.1 Ikhofi neziphuzo ezine-caffeine
1.2 Izinongo nokushisayo
1.3 Iziphuzo ezidakayo
1.4 I-Mint nokudla okunambitheka njenge-mint
1.5 Amanye amathiphu okugwema i-reflux ye-gastroesophageal
Ukudla okufanele ukugweme uma une-reflux ye-gastroesophageal
Lapho uchwepheshe enquma ukuthi uhlushwa yi-reflux ye-gastroesophageal, into yokuqala okufanele uyenze ukucacisa ukuthi iyini imbangela. Ezimweni eziningi lokhu kubangelwa isisindo esiningi, lapho into ebaluleke kakhulu iyoba lungisa ukudla kokulahlekelwa isisindo ukuxazulula lokhu kanye nezinye izinkinga ezingenzeka. Uma inkinga ibonakala ebusuku, ngokuvamile kunconywa ukuthi ukudla kokugcina kudliwe okungenani amahora angu-3 ngaphambi kokulala.
Izinguquko zemikhuba zibaluleke kakhulu ngoba zingasiza ekunciphiseni izimpawu ze-reflux ye-gastroesophageal. Ukwengeza, udokotela uzoncoma ukudla okuhambisana nezidingo zakho ongayigwema i-reflux kanye nemiphumela etholakala kukho. Kubalulekile futhi ukugwema imikhiqizo ethile nokudla ukuthi ngenxa yezingxenye zabo kungandisa i-reflux ye-gastroesophageal, njengalezi ezilandelayo.
Ikhofi neziphuzo ezine-caffeine
Ngaphezu kokwanda kwe-asidi esiswini, iziphuzo ezine-caffeine nekhofi, ngisho ne-decaf, ziyavusa futhi zingase. shintsha ukugayeka kokudla entweni eseyalimala kakade. Ngenxa yalesi sizathu, kubalulekile ukugwema ukusetshenziswa kwemikhiqizo equkethe le nto, ikakhulukazi ikhofi. Esikhundleni salokho ungazama ukumiliselwa okufana ne-rooibos noma i-chamomile, epholisa futhi esiza ekugayeni ukudla.
Ngokuvamile, uma une-reflux ye-gastroesophageal kufanele ugweme noma yikuphi ukudla nomkhiqizo ongacasula izindonga ze-esophagus. Phakathi kwazo kukhona izinongo, upelepele oshisayo, amafutha kanye nokudla okuthosiwe, ukudla okukhiqiza i-asidi efana notamatisi, izithelo ezisawolintshi, ushokoledi noma ikhofi. Kugweme lokhu kudla ekudleni kwakho ukuze unciphise i-asidi ngemva kokudla.
Utshwala abubathandi neze abantu abaphethwe i-reflux ye-gastroesophageal, ikakhulukazi lezo ziphuzo ezidakayo ezivela ekuvutshelweninjengobhiya noma iwayini. Isizathu siwukuthi bandisa ukukhiqizwa kwe-gastric acid, okubangela i-reflux. Ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukugwema uphuzo oludakayo ukuvimbela i-reflux.
I-Mint nokudla okunambitheka njenge-mint
Lokhu kungenxa yokuthi i-mint ingacasula ulwelwesi lomminzo futhi ukwandisa i-reflux. Ngenxa yalesi sizathu, kunconywa ukuqeda leyo mikhiqizo equkethe ukunambitheka kwe-mint, okuhlanganisa amaswidi, ama-infusions kanye ne-mint ishiya ngokwabo esimweni sabo semvelo.
Amanye amathiphu okugwema i-reflux ye-gastroesophageal
Ngaphezu kokuqeda ukudla nemikhiqizo engalimaza isimiso sakho sokugaya ukudla nakakhulu, kubalulekile wenze izinguquko ezithile emikhubeni ukuthuthukisa isimo se-reflux ye-gastroesophageal. Ngakolunye uhlangothi, kufanele uqale ukudla okunothe ngobisi olunamafutha amancane, imifino, amafutha anempilo, nezinhlanzi ezimhlophe. Kubaluleke kakhulu futhi ukukhetha indlela efanelekile kakhulu yokupheka, ugweme ukudla okuthosiwe, izitsha ezibabayo noma amasoso.
Ukudla ukudla okulula okumbalwa usuku lonke kuzokusiza wenze kangcono Ukugaya. Ngendlela efanayo, kufanele ugweme ukudla okuningi futhi okusindayo, okunzima ukukugaya futhi okwandisa i-reflux. Ekugcineni, susa ugwayi empilweni yakho ngoba uma kunezizathu eziningi zokwenza kanjalo, ukuba ne-reflux ye-gastroesophageal iyisengezo sokuqeda lesi senzo esiyingozi kakhulu empilweni. Ngalawa macebiso kanye nalawo anikezwe udokotela wakho onguchwepheshe, ungakwazi ukunciphisa umonakalo obangelwa i-reflux ye-gastroesophageal.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ezempilo » Izifo » I-reflux ye-gastroesophageal, yikuphi ukudla okufanele ukugweme